दुई छोराको बाउ जो केटी बने, श्रीमतिले ते'श्रो लि'ङ्गि भन्ने थाहा पाएपछि छोडि (मार्मिक कथा)
दुई छोराको बाउ जो केटी बने, श्रीमतिले ते’श्रो लि’ङ्गि भन्ने थाहा पाएपछि छोडि (मार्मिक कथा)
हाम्रो समाजमा महिला र पुरुष बाएक तेश्रो लिङ्गि मानिस पनि हुन्छन जसलाई हामीले “छक्का” को संज्ञा दिइन्छ। उनीहरुलाई मानिसलाइ गर्ने जस्तो व्यवहार कमै मानिसहरुले गर्ने गर्छन। यस्तै विभिन्न कारणले आफ्नो जीवन चलाउन लिप्स्टिक लगाएर रत्नपार्कमा उभिन पुगेकी सुनिता लामाको कथा हो यो।
सुनिता लामा पहिला केटा हुनुहुन्थियो र उहालाई केटा नै मन पर्थियो। उहा आफुले आफैलाई प्रस्न पनि गर्नु हुन्थियो तर भगवानको खेल न हो समय बित्दै गएसी उहाले सबै कुरा बुझ्दै जानु भयो र आफु तेस्रो लिङ्गि भएको था पाउनु भयो।
सुनिताको बुवाले धेरै रक्सि पिउनु हुन्थियो र रक्सि पिएर आमालाई कुट्नु हुन्थियो। आमालाई मात्र हैन सुनितालाई पनि कुट्नुहुन्थियो। कुटाई नखाको दिन हुदैन थियो। सुनिताको फरक व्यवहारको कारण गाउमा कुरा काट्न थालिसकेका थिए।
सुनिताको घर परिवार र समाजको अभद्र व्यवहारले गर्दा सुनिताले आफ्नो घर छाड्न पर्यो। उनि घर छाडेर काठमान्डौ आईन। काठमान्डौ आएर उनले जुठो भाडा माझ्ने देखि लिएर गाडिमा सह चालकको काम पनि गरिन तर उनले सबै तिर अपहेलना खेप्न पर्यो।
उनि जहाँ काम गर्थिन त्यहा बाट तेश्रो लिङ्गि भएको कारण निकालिन्थिन। एकदिन सडकमा उभिएको बेला एक जना व्यक्तिले खान बस्न दीने भनेर घरयासी काम गर्न साथमा लग्यो तर उनलाई उक्त व्यक्तिले जवरजस्ती गर्न खोजेपछि फेरी उनि भागेर गाउ नै फर्किन।
गाउ फर्किदा बुवा आमाको निधन भैसकेको थियो। एक्ली बुढी हजुर आमा मात्र हुनुहुन्थियो। हजुर आमाको करले गर्दा मन नलागी-नलागी बिहे गरिन। बिहे गरेपछि श्रीमतीसंग १ बर्ष सम्म उनि साथि भएर मात्र बसिन र हजुरआमाले पनाति खेलाउने रहर गरेसी श्रीमति संग सल्लाह गरेर बच्चा जन्माईन।
श्रीमती र बच्चा लाई गाउमै छाडेर फेरी उनि काठ्माण्डौ फर्किन तर काठमान्डौमा उनलाई जागिर दिने कोहि पनि थिएनन्। उनले बाध्यताले फेरी लिप्स्टिक लगाएर रत्नपार्कमा उभिन बाध्य भईन र केहि समय यौ’न कर्मिको रुपमा काम गर्न थालिन। कहिले काही घर जादा उनि केटा भएर जाने गर्थिन।
उनको अर्को बच्चा पनि जन्मियो र समय बित्दै जादा उनको छोरा एकाएक बिरामी भयो। श्रीमती छोराको उपचारको लागि काठमान्डौ कोठामा आईन त्यसपछि उनले फेरी यौ’न कर्मी भएर काम गर्न छाडिन।
समय बित्दै जादा उनलाई निकै गारो भएको थियो। उनले आफ्नी श्रीमतीलाई कसरी आफ्नो बारेमा भन्ने भनेर मनमा उकुस मुकुस भएको थियो। यस्तै एक दिन हिम्मत गरेर उनले आफु तेस्रो लिङ्गि भएको कुरा श्रीमतीलाई सुनाईन त्यसपछि श्रीमतीले “मलाइ किन धोका दिइस, मेरो जिन्दगी किन बर्बाद पार्दिस भन्दै रुदै सुनितालाई पिटिन चिथोरिन। “
सुनिताले हजुरआमाको कारणले आफुले विवाह गर्न बाध्य भएको बताईन तर उनको श्रीमतीको मन के मान्थियो अन्तत दुवै सन्तान सुनितालाई नै छाडेर अर्कैसंग पहिला गईन। आफ्ना साना छोराहरुलाई हुर्काउन उनलाई निकै गारो थियो।
कसैले उनलाई काम दिदैन थियो। त्यसैले फेरी उनले आफ्ना दुइ छोराको पालन पोसणको लागि लिप्स्टिक लगाएर रत्नपार्कमा उभिन बाध्य भईन। उनको यो बाध्यता न समाजले बुझ्यो न घरका परिवारले बुझे।
अहिले सुनिता महिला भएकी छिन। उनका जीवनका अनेक उतार चडाप साथै उनको बारेमा बिस्तृत जान्न मन छ भने तलको भिडियो हेर्नुहोला। उक्त भिडियोमा उनले आफ्ना सम्पूर्ण कुराहरु राखेकी छिन।
बाबुराम माथि खनिए महेश बस्नेत,’मान्छे जिउँदै ज’लाएर मा’र्नेले ओलीलाई हिटलर भन्ने ?
‘अब एमालेले जितेको खबर कुनै पत्रकारले लेख्ने अवसर पाउने छैनन्’: मेटमणि चौधरी
प्र्यांकको नाममा बिना अनुमति कसैको तस्बिर र भिडियो खिचेर प्रकाशन गरे यस्तो कारवाही
एमाले कमिटी सदस्य सिलवाल नेकपा (एस)मा प्रवेश
आगामी निर्वाचनमा एमाले एक्लै जित्ने हैसियतमा छ : शंकर पोखरेल
‘पुष्पा’ फिल्मको दृश्य वास्तविकतामै, ५८ जना प’क्रा’उ
ओलीलाई कमजोर बनाउन माधव नेपालको यस्तो छ भूमिका
सत्ता गठबन्धनको भविष्य वामदेव गौतमको हातमा !
वर्षमानको करोडौं रुपैंया जम्मा हुने आधार छैन, उपचार खर्च कसरी जुट्यो ?